एमसीसीकाे बहानामा गठबन्धनलाई ताेड्ने खतरा छ: डा. भट्टराई (भिडियो सहित) - Nepal’s First News Agency
एमसीसीकाे बहानामा गठबन्धनलाई ताेड्ने खतरा छ: डा. भट्टराई (भिडियो सहित)
काठमाडौं, पुष ०५ गते । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले एमसीसीको बाहानामा सत्ता गठबन्धनलाई तोड्ने खतरा रहेको बताउनुभएको छ । सोमवार नेकपा(एकीकृत समाजवादी) निकट समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले अघिल्लो वर्ष प्रतिनिधि सभा विघटन भएको पुष ५ गतेको दिनलाई कालो दिनको रुपमा स्मरण गर्दै आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै डा. भट्टराईले एमसीसीको बाहानामा सत्ता गठबन्धनलाई तोड्ने खतरा रहेको बताउनुभएको हो । देशी, विदेशी शक्ति लागेर गठबन्धन भत्काउन सक्ने भन्दै यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । एमसीसीको सम्बन्धमा सत्तारुढ गठबन्धनका बिचमा सहमती जुटाएर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सत्ता गठबन्धन भत्काएर नयाँ ढंगको प्रतिगमन आउने खतरा रहेको उहाँले औँलयाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले ध्यान पुर्‍याउन सकेनौँ भने, यो वा ऊ बाहानामा हामीले तन्काउन थाल्यौँ भने सानो सानो एउटा समस्याले पनि एउटा ठुलो विस्फोटक रुप लिएर यो हाम्रो गठबन्धनलाई जसरी भत्काउने प्रयत्न भित्र बाहिरबाट भइरहेको छ, त्यो भत्कने र फेरी नयाँ ढंगले प्रतिगमन अगाडी आउने खतरा छ । टड्कारो रुपमा छ यो अनुमान मात्रै होइन । खासगरी कतिपय मुद्धाहरु, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्धाहरु अगाडी छन् । अहिले भर्खरै बढी चर्चामा आएको एमसीसीको जुन एउटा मुद्धा छ । यस्ता मुद्धामा हामीले राष्ट्रिय सहमती, कमसेकम गठबन्धनका घटकहरुका बिचमा एउटा सहमती जुटाएर हामी अगाडी बढ्न सकेनौँ भने यही बाहानामा भित्री र बाहिरी शक्तिहरुले खेलेर गठबन्धन तोडिदिने अनि त्यसपछि फेरी अर्को ढंगले प्रतिगमन अगाडी आउने खतरा छ । यतापट्टी हामी सबैको ध्यान आकृष्ट होस् ।’